अन्तत अमेरिकी मेमरी च्याम्पियन नेल्सन डेलिसले पनि विजय शाहीको असली रुपको पहिचान गरे, भर्खरै राखे यस्तो दोश्रो भिडियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 25, 2021 AdminLeaveaComment on अन्तत अमेरिकी मेमरी च्याम्पियन नेल्सन डेलिसले पनि विजय शाहीको असली रुपको पहिचान गरे, भर्खरै राखे यस्तो दोश्रो भिडियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, ९ श्रावन । अमेरिकी मेमरी एथलेट नेल्सन डेलिसले अन्तत विजय शाहीको असली रुप पहिचान गरेका छन । नेल्सन आफै चार पटक अमेरिकन मेमरी च्याम्पियन समेत हुन् । केहि समय अगाडी विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न नेपाल आएको बेला विजय शाहीको अनुरोध स्वीकारेर उनलाई भेटेपछि विजय शाही सहि हो जस्तो पाराको भिडियो बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेपछि उनको उक्त भिडियो नेपाली माझ निक्कै चर्चामा आएको थियो ।
विजय शाहीसंगको अन्तर्वार्ता भनेर नेल्सनले सार्बजनिक गरेको उक्त भिडियोको धेरै नेपाली युट्युबरहरुले रियाक्सन भिडियो पनि बनाएका थिए । त्यस्तै नेल्सनले युट्युबमा राखेको विजय शाहीको भिडियो मुनि हजारौ नेपालीहरुले प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए । भिडियो अपलोड गर्दा सम्म विजय शाहीमा सामान्य प्रतिभा त छ कि जस्तो सम्झेर नेल्सनले युट्युबमा राखे पनि त्यस मुनि आएको प्रतिक्रियाले नेल्सनको आखा खोलि दिएको थियो ।
उनको भिडियो मुनि हजारौले विजय शाही मात्र स्क्यामर हुन्, नेल्सनलाई उल्लु बनाए जस्ता प्रतिक्रियाको वर्षा भएको छ । नेल्सनलाइ उक्त भिडियोमा विजयले कसरी बेबकुफ बनाए भनेर धेरै युट्युबहरुले प्रमाण पनि देखाएका थिए । ति भिडियोहरु पनि नेल्सनले राम्ररी केलाएर अन्तत उनि आफु स्क्याम भएको निष्कर्षमा आएका छन ।
नेल्सनले आफु उल्लु बनेको भन्दै दोश्रो भिडियोमा स्वीकारेका छन । भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस्ः
शिक्षकले गरे आफ्नै विद्यार्थीमाथि यौ’न दु’र्ब्य’बहार, छात्राहरु भन्छन्- ‘सरले हाम्रो सं’वेदनशील अं’गमा छुनुभयो’ ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल साउन २० गते बुधबार, तदनानुसार सन् २०२१ अगस्ट ४ तारिख